ဝေါဟာရ ဇာစ်မြစ် (ဗျူပ္ပတ်)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉ နှင့် ၂၀ ရာစုများအတွင်းမှ စူးစမ်းရှာဖွေသူများနှင့် သဘာဝသမိုင်းပြတိုက် ဝန်ထမ်းများက များပြားလှသော မျိုးစုခွဲများ (သို့) ထိုစဉ်အချိန်က သုံးနှုန်းသော မျိုးနွယ်စုများ အားလုံးကို ကြောင်ကြီးမျိုးစု၏ မျိုးစိတ်များအဖြစ် အကြံပြုခဲ့ကြလေသည်။ ဇီဝမျိုးခွဲခြားမှုပညာရှင် "ပိုကော့ခ်" သည် လန်ဒန် သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်မှ သတ္တဗေဒဆိုင်ရာ စုဆောင်းထားမှုမှရရှိသော‌ မျိုးစိတ်နမူနာပုံစံများဖြင့် မျိုးစိတ် အုပ်စုဖွဲ့ထားမှုများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ရာ စာရင်းဇယားမှာ သိသိသာသာ တိုတောင်းသွားစေခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းကာလများမှစ၍ ကြောင်ကြီးမျိုး မျိုးစိတ်များစွာသည် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ သုတေသန၏ စိတ်အဝင်စားဆုံး အကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့ပြီး အများစုမှာ သီးခြားပိတ်‌လှောင်မွေးမြူထားမှုများမှ ရရှိသော မျိုးစိတ်နမူနာပုံစံများကို အသုံးပြုခဲ့ကြလေသည်။ လေ့လာမှုရလဒ်များအရ ခြင်္သေ့နှင့် ကျားသစ် မျိုးစိတ်များသည် ဗီဇမျိုးရိုး ကွဲပြားမှုမှာ ပြည့်စုံခြင်းမရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့အကြား မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေခဲ့လေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အာဖရိက ကျားသစ်ကောင်ရေအားလုံးကို (P. p. pardus) အနေဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ရန်နှင့် အာရှကျားသစ် ကောင်ရေအားလုံးအတွက် မျိုးစိတ်ခွဲအဖြစ် အမည်ပေးမည့် (၈)ခုကိုသာလျှင် သီးခြားအခွဲများအနေဖြင့် ဆက်လက်ထားရှိရန် အဆိုပြုခံခဲ့ရသည်။
↑ Macdonell, A. A. (1929)။ "पाण्डर pând-ara"။ A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout။ London: Oxford University Press။ p. 95။ 8 March 2021 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Genetic diversity, evolutionary history and implications for conservation of the lion (Panthera leo) in West and Central Africa" (2011). Journal of Biogeography 38 (7): 1356–1367. doi:10.1111/j.1365-2699.2011.02500.x. Archived 8 June 2019 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြောင်ကြီးမျိုး&oldid=742261" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။